Saraakiisha Barnaamijka Cimilada & Tamarta ee Midwest
Machadka McKnight wuxuu raadiyaa labo sarkaal oo barnaamij ah si loo hormariyo hadafka Cilmi-badeedka & Tamarta Midwest (MC&E) barnaamijka lagu qaado tallaabo geesinimo leh dhibaatada cimilada adoo si aad ah u gooya wasakheynta kaarboonka ee bartamaha-galbeed 2030. Saraakiisha Barnaamijka ee cusub ayaa gacan ka geysan doona qaabeynta iyo hagida dhabbaha dadaallada cimilada ee aasaaska. Doorradani waxay soo bandhigayaan fursado xiiso leh oo loogu talagalay hoggaaminta fikirka ee ku saabsan waxqabadyada deeqaha, oo lagu ogeysiiyo ballanqaad qoto dheer oo ku aaddan sinnaanta jinsiyadda, si loo taageero loona dardar-geliyo casriyeynta cimilada iyo istiraatiijiyadda.
Ugudbinta Agaasimaha Barnaamijka Cimilada & Tamarta ee Midwest, Saraakiisha Barnaamijka ayaa kormeeri doona oo dhisi doona xayeysiisyo deeqo muhiim ah iyo iskaashi lala yeesho maalgeliyeyaasha dhexdhexaadka ah waxayna si firfircoon ula shaqeeyaan McKnight's Maalgashiga Saameynta kooxda iyo Bulshooyinka Feejignaanta & Sinnaanta ah kooxda barnaamijka. Barnaamijka MC&E wuxuu adeegsadaa maalgelintiisa deeq-bixineed si loo taageero dadaallada lagu dhisayo awoodda iyadoo loo marayo iskaashi, iswaafajinta cimilada iyo yoolalka sinnaanta si loo hormariyo waxqabadka geesinimada leh ee dhibaatada cimilada.
Saraakiisha Barnaamijka MC&E waa shaqsiyaad shaqsiyeed wax ku biiriya. Waxay u wargaliyaan Agaasimaha Barnaamijka ee MC&E.
Si firfircoon ula hawlgala asxaabta McKnight ee Maalgelinta Saameynta iyo Guddiga Maalgashiga Ergada ee guddiga si loo aqoonsado loona falanqeeyo himilooyinka iyo maalgelinta la xiriirta barnaamijka ee hormarinta yoolalka barnaamijka.
Khibrad ugu yaraan shan sano ah oo ku saabsan cimilada iyo arrimaha tamarta heer degmo ama heer qaran.
Khabiir guud oo aad u xiisa badan oo la aamini karo oo cimilada keena aqoon farsamo ama siyaasadeed oo dearbonis ama khibrad u leh dhaqdhaqaaqa-dhisida, ololeyaal socda, abaabul hoose, ama howlo la xiriira.
Xirfadaha isgaarsiinta afka iyo qoraalka gaar ahaaneed oo ay kujiraan awooda la muujiyay ee cilmi baarista, dhageysiga, isku dubaridka iyo falanqaynta macluumaadka, sameynta dukumiintiyada, iyo soo bandhigida xogta si cad oo kooban oo ku habboon shaqaalaha ku habboon, oo ay ku jiraan maamulka sare, shaqaalaha barnaamijka, iyo guddiga agaasimayaasha.
U muuji dulqaad madmadow, oo leh karti uu si madaxbanaan ugu shaqeeyo hadana raadsado fikradaha sida loogu baahan yahay.
Xirfadaha abaabulka iyo kala-mudnaanta si loo buuxiyo waqtiyada loo qabanayo jawiga deg-degga badan lehna dalabyo badan oo tartamaya. Awood u lahaanshaha ka beddelka horumarinta istiraatiijiyadeed ee fulinta maalin kasta si fudud.
Rabitaan dhab ah in la dhageysto oo wax laga barto kuwa kale, iyadoo laga shaqeynayo ixtiraamka deeq-bixiyeyaasha loona abuurayo jawi waxbarasho joogto ah ururada bahwadaagta ah iyo khubarada waaxda.
McKnight wuxuu bixiyaa xirmo magdhow tartan ah. Faa'iidooyinka waxaa ka mid ah caafimaadka, ilkaha, nolosha, iyo caymiska naafada; fasax lacag la'aan ah; ku biirinta qorshaha hawlgabka; u dhigma barnaamijka hadiyadaha sadaqada; iyo jawi shaqo oo dabacsan. Kuwani waa shaqooyin waqti-buuxa ah, oo laga dhaafay oo ku saleysan Minneapolis. Mushaharku waa $106,000-1122T112,000.
Soodejiso astaanta shaqada. Fadlan soo gudbi resumeygaaga iyo warqad dabool ah oo muujinaya dareenkaaga booska iyo ku habboon doorka Xariirka Musharax Waldron. Waraaqaha waxaa loo gudbin karaa Sarah Meyer.
Baadhitaankan waxaa lagu fulinayaa iyadoo laga caawinayo koox ka socota Waldron.
2019, guddiga agaasimayaasha McKnight waxay ansixiyeen bayaanka howlgalka cusub, oo cusub Qaab-dhismeedka Istaraatiijiga ah, iyo dhowr isbeddel oo ku yimid maalgelinta barnaamijyada. Dadaalladaas waxaa ka mid ahaa ballaarin weyn oo ay Cilmi-badeedka & Tamarta Midwest (MC&E) barnaamijka, oo ku socda wadadii uu ku labanlaabi lahaa $16 milyan ee deeqaha sanadlaha ah sannadka 2020 illaa $32 milyan sannadka 2022, taasoo ka tarjumeysa deg-degga dhibaatada cimilada iyo mudnaanta sare ee guddiga.
Himilada barnaamijka MC&E ee la ballaariyey ayaa ah qaado tallaabo geesinimo leh dhibaatada cimilada adoo si aad ah u gooya wasakheynta kaarboonka ee bartamaha-galbeed 2030. Ku guuleysiga himiladan hamiga leh xawaaraha iyo cabirka lagama maarmaanka ah sidoo kale waxay u baahan tahay a dimuqraadiyad caafimaad qabta, oo salka ku haya cadaalad jinsi iyo mid dhaqaaleed, taas oo dadka oo dhami ay leeyihiin cod iyo awood ay ku keeni karaan isbadal ku saabsan arimaha noloshooda iyo noloshooda saameynaya. Kooxda MC&E waxay ku sii wadi doonaan istiraatiijiyaddan iskaashi dhow McKnight's Bulshooyinka Feejignaanta & Sinnaanta ah barnaamijka, kaas oo ka taageera bulshada sidii ay u dhisi lahaayeen dhaqdhaqaaqyo badan oo dhaqamo kaladuwan oo isbeddel ah.
Xidhan: Nofeembar 23, 2020
Codsadayaasha waxaa loo kaxeynayaa Waldron's Portal Musharax si ay u soo gudbiyaan resume-kooda iyo warqada daboolka ah. Waraaqaha waxaa loo gudbin karaa Sarah Meyer.